स्वास्थ्य Archives | Page 190 of 192 | ईमाउण्टेन समाचार
३० साउन, गोरखा । गोरखाको गाँखुका तीन र लक्ष्मीबजारका दुई जनामा स्वाइनफ्लु रोग लागेको पुष्टि भएको छ । एक साताअघि […]
साउन २९, काठमाडौँ । सरकारले बाढि र पहिरोमा परी घाइते भएकाहरुको तत्काल उपचारको व्यवस्था मिलाउने प्रतिवद्धता पनि जनाएको छ । […]
२७ साउन, काठमाडौं । १९ दिनदेखि आमरण अनशनमा बस्नुभएका डाक्टर गोविन्द केसीको माग प्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै आज दिनभर देशभरका सरकारी अस्पतालमा बहिरंग […]
सरकारी चिकित्सक सङ्घद्धारा देशभरका सरकारी अस्पतालको बहिरङ्ग सेवा बन्द
साउन २७, काठमाण्डौं । सरकारी चिकित्सक सङ्घ (गोदान)ले आज देशभरका सरकारी अस्पतालमा आकस्मिक बाहेकका सबै सेवाहरु बन्द गरेको छ । […]
सरकारले डाक्टर केसीको मागलाई चासो नदिदाँ ऐन संशोधनको बिषय अन्यौलमा
सरोज थापा , साउन २६ , काठमाण्डौँ । चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधारको माग राख्दै त्रिवि शिक्षण अस्पतालका वरिष्ठ […]
सकलसेल एनिमिया कैलालीमा निःशुल्क उपचार सेवा सुरु
साउन २६ , कैलाली । थारु समुदायका मानिसलाई मात्र देखा पर्ने सिकलसेल एनिमिया रोगको कैलालीमा निःशुल्क परीक्षण तथा उपचार सेवा […]
२५ साउन, भक्तपुर । नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराई अस्पतालबाट टिस्चार्ज भएका छन् । भक्तपुरमा रहेको नागरिक कम्युनिटी अस्पतालमा […]
स्वाइनफ्लुबाट हालसम्म १० को मृत्यु, ३८१ बिरामी
२५ साउन, काठमाडौँ । स्वाइनफ्लुका कारण हालसम्म १० जनाको मृत्यु भएको छ भने ३८१ जना बिरामी परेका छन् । स्वास्थ्यमन्त्री […]
२४ साउन, काठमाडौँ । काठमाडौँ मेडिकल कलेज सिनामंगलमा चिकित्सकले दिएको औषधिको असरले नौ वर्षीया बालिकाको मृत्यु भएको छ । […]
अप्सरा गौतम , साउन २४ , काठमाण्डौँ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधारको माग राख्दै त्रिवि शिक्षण अस्पतालका वरिष्ठ चिकित्सक डाक्टर गोबिन्द […]
२३ साउन, चितवन । चितवनमा स्क्रब टाइफसबाट एकजनाको मृत्यु भएको पुष्टि भएको छ । जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयका अनुसार चितवनको नारायणी […]
प्रोस्टेटको शल्यक्रिया गरेका डा. भट्टराईको स्वास्थ्यमा सुधार
साउन, भक्तपुर । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईको स्वास्थ्यमा सुधार आएको छ । उनको गत शनिवार प्रोस्टेट […]
अपसरा लामीछाने , साउन २३, काठमाण्डौँ । केही दिनयता काठमाडौं उपत्यकासहित देशका विभिन्न ठाउँमा स्वाइनफ्लुको संत्रास फैलिएको छ । सन् […]
जिल्ला अस्पतालले सुरु गर्यो आफ्नै फार्मेसी
जेठ १३, देवराज सुवेदी, सिन्धुपाल्चोक।
जिल्ला अस्पताल सिन्धुपाल्चोकले शुक्रबार विशेष कार्यक्रमकाबीच आफ्नै स्वामित्वमा औषधि बिक्री केन्द्र (फार्मेसी) सञ्चालनमा ल्याएको